UK Dokotera milaza izany: manatsara ny fahasalamana ny famakiana famoronana an-tserasera | Famoronana an-tserasera
Inona dia azo antsoina hoe preskripsi nomen'ny dokotera Mety hiova tanteraka izy io aorian'ny zavatra hita tato ho ato. Ary io dia noho ny fanentanana vaovao nataon'ny governemanta britanika, dia hiezaka ny hitahiry pilina vitsivitsy ho an'ireo marary hanoloana azy ireo amin'ny zavakanto sy kolontsaina.
Antsoina hoe "prescription social", izay kendrena dia manasongadina ny tombotsoan'ny zavakanto apetraka ho fitsaboana ho an'ny fahoriana sy aretina isan-karazany. Araka ny filazan'ny sekretera anglisy misahana ny fahasalamana, Mat Hancock, voaporofo ara-tsiantifika fa ny fidirana amin'ireo hetsika ara-tsosialy sy ara-javakanto dia manatsara ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana ananan'ny marary.
Raha fintinina, inona no mahazo anao andao ho sambatra kokoa ary hanana fahasalamana tsara kokoa. Ankoatry ny fitsaboana ireo marary amin'ny hetsika toy ny fandehanana any amin'ny mozika na sokajy zava-kanto, ny tanjona dia ny handefasana azy ireo any amin'ny tranombakoka, teatra, ary hetsika ara-kolontsaina hafa izay manatsara ny famoronana manokana.
Io fomba fatra-paniry laza io dia ampahany amin'ny «Paikady fanirery» ao amin'ny Departemantan'ny Digital, Culture, Media ary Fanatanjahantena. Araka ny praiminisitra Theresa May tenany, ity hetsika ity dia mitaky hetsika ara-kolontsaina sy fiaraha-monina izay hiady amin'ny fomba feno amin'ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao androntsika izao.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mankany amin'ny dokotera any Angletera ianao dia mety hivoaka miaraka amin'ny dokotera milaza aminao izany mila mianatra kilasy fanaovana teatra ianao na inona ny tapakila hijerena asa. Hetsika tsy mampino iray hanazavana mazava fa betsaka kokoa ny fitsaboana ireo aretina ara-batana sy ara-tsaina rehetra ireo noho ny pilina vitsivitsy notoroan'ny dokotera ary maro no avy amin'ny indostrian'ny fanafody.
Ka hoy aho hoe, raha te hanana fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina tsaratsara kokoa ianao dia mankanesa foana isan'andro hamaky anay. UK Dokotera milaza izany:manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ny famakiana ny Creativos Online ny iray!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny dokotera any Angletera dia manoratra zava-kanto sy kolontsaina hanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana amin'ny marary